सलमान खानले सुटिङ सेटमा किन लगाए माेबाइलमाथि प्रतिवन्ध ?
Sat, Dec 14, 2019 at 11:24am
भ्रमण वर्ष सफल पार्न रेस्टुरेन्ट तथा बारको भूमिकामा जोड #आहा खबर# छोराछोरीको शिक्षामा देखिएको विभेद हटाउनुपर्छ : मन्त्री बाँस्कोटा #आहा खबर# धनुषा विस्फोटका अपराधीलाई कारवाही गरिछाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता #आहा खबर# पहिरो खसेपछि बेनी–जोमसोम सडक विहानैदेखि अवरुद्ध #आहा खबर# बेलायत चुनाव : भारतीय मूलका १५ सांसद बने, ३ जनाले जिते पहिलोपटक #आहा खबर# योगले मस्तिष्कलाई फाइदा गर्छ, अध्ययनले अरु के-के भन्छ ? #आहा खबर# धेरै खुर्सानी खान किन मन लाग्छ ? पिरो खानु कत्तिको स्वास्थ्यबर्द्धक ? #आहा खबर# सेना चढेको बस दुर्घटना हुँदा ३० घाइते #आहा खबर# अब ब्रेक्जिट समस्याको समाधान सुरू गरौं : बोरिस जोनसन #आहा खबर# धनुषा बम विष्फोट : प्रहरी इन्सपेक्टर दाहालसहित ३ जनाको मृत्यु #आहा खबर# पर्वतमा २१ सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु #आहा खबर# भूकम्प प्रभावित ७७ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण हुँदै #आहा खबर# मध्यराति धनुषामा बम विष्फोट, एकै परिवारका २ को मृत्यु, इन्स्पेक्टरसहित ४ जना गम्भीर #आहा खबर# चिनबाट दैनिक ४५ टन प्याज भित्रिएपछी मुल्य केही सस्तियो #आहा खबर# किन भयो देशभर हिमपात र वर्षा ? चिसोमा कसरी रहने फिट एन्ड फाइन ? #आहा खबर#
मुम्बई, २३ साउन ।
फिल्म दबंग ३ को सुटिङमा ब्यस्त रहेका बलिउड स्टार सलमान खानले सुटिङ सेटमा माेबाइलमाथि प्रतिवन्ध लगाएका छन् । फिल्ममा उनको लूकलाई गोप्य राख्न सलमान खानले सुटिङ यूनिट पुरैलाई मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरेका हुन् । जसकारण कतै उनको लुक बाहिर सार्वजनिक हुन सक्ने सलमानलाई चिन्ता पनि रहेको छ ।
यस फिल्ममा उनिसँग साई मान्जेकरले रोमान्स गर्नेछिन् । उनको यो फिल्म डेब्यु फिल्म हुनेछ । जसकारण सलमानले सुटिङ पूरा नहुँदासम्म उनले साई मान्जेकरलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । उनले साईलाई समेत मिडियामा र पब्लिकमा नजान आग्रह गरेका छन् ।
सलमान आजभोलि कम्मर कसेर प्रतिक्षित फिल्म दबंग ३ को सुटिङ पूरा गर्नमा व्यस्त रहेका छन् । यस फिल्ममा उनी पुनः एकपटक चुलबुल पाण्डेको भूमिकामा देखिँदैछन् । मिडिया रिपोर्ट अनुसार सलमान बुढो व्यक्तिको भूमिकामा पनि देखिनेछन् ।
प्रभु देवाको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म डिसेम्बर २० मा रिलिज हुँदैछ । फिल्ममा सलमान र साईका साथै सुदिप, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान लगायतको पनि अभिनय रहेको छ ।